Dabaaldegga Istunka degmada Afgooye ee si nabad ah ku dhamaaday
Buluugleey July 21, 2005
Waxaa si nabad ah ku soo gabagaboobay cayaaro dhaqameedyadii lagu xusayey sanadka cusub ee Soomaalidu u taqaan dabshidka ama Istunka. Dadweynaha ku dhaqan Muqdisho iyo agagaarkiisa ayaa u soo daawasha tagay iyagoo si aad ah u xiiseeynayey ciyaar dhaqameedyadaas ee lagu sagootinayey sandkii hore, looguna dabaaldagayey sanadka cusb.
Dadka deggan degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku teedsan ayaa caado dhaqameed ab soo jireen ah oo ay dad badani aaminsanyihiin ayaa si weyn loo qadariyey. Waxaa halkaas lagu soo bandhigey ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee kala du-duwan.
Dadweynaha u soo dawasha tegay ayaa jecleestay ciyaarta istunka loo yaqaan oo taariikh ahaan ka soo jeeda sida wararka inagu soo gaarayaan sheegayo ciyaarta lagu ciyaari jiray webiga dhexdiisa, waxaana lagu ciyaari jiray geed la yiraahdo Qoonlo. Geedkaasi ayaa laysku tuur-tuuri jiray kadibna ciyaartaas ayaa isku bedeshay in dadka ka qeybqaadanaya isku qaraacaan sirbi ama ul. Is uleynta waxaa wehliyay ciyaarta la yiraahdo Aw daangoole, shirta aay Garooray, shirta Biyo-galka waxaana lagu soo gabagabeeyay dab-shidka oo dadka soo daawasha tegay xitaa badankooda ka qeybqaateen. Dadweynihii ka soo qeyb galay ayaa kuwada maqsuuday habsamida ay shirta Istunka oo si nabagelyada ah ku dhaamaty.